Okisan's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (12)Discussions (487)EventsGroups (20) Okisan's Likes Okisan's Friends
View All Okisan's Groups
Google Python Web Framew…
Singapore IT Business Co…
Myanmar Input Method Edi…
Apple & Mac Users
Started Sep 1, 2012 How to see MediaCorp HD5 for free?
Started this discussion. Last reply by John Moe Jun 23, 2010. Burmese script on mobile
Started this discussion. Last reply by Mark Dec 24, 2009. View All
Okisan has not received any gifts yet
Okisan replied to Aung Myint Tun's discussion How to join multiple dataset which are saved in session?"LINQ cannot join two dataaset? "Jan 14, 2013Okisan replied to Ko Chit's discussion Unicode Migration Q&A"How about Open source Padauk font http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=Padauk ?
Building modern web app
Posted on June 1, 2012 at 10:44am3Comments
အခုချိန်ဟာ Web developer တွေအတွက် အလွင်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒါမျိုး ခတ် ကြုံရဖို မလွယ်ပါဘူး။ Cloud services တွေကြောင့် လျှင်မြန်ပြီး scalable ဝက်ဘ် ဆိုက်တွကို ကုန်ကျစရိတ် မများပဲ တည်ဆောက်နိူင်ပါတယ်။ Cloud resource တွေကို client app က တိုက်ရိုက် အသုံးပြု နိူင်မယ့် နည်းပညာတွေ ရှိနေပြီ။ web app store တွေမှာ အလွယ်တကူ လူအများဆီမှာ ရောင်းချနိူင်ပါတယ်။ web social ခတ်မှာ ဆိုတော့ modal girl ငှားပြီး ကြော်ညာစရာ မလိုပဲ web fun တွေနဲ့ပင် virus ပျံ့သလို လူများစုဆီ…
Continue MIT ဆရာပူဇော်ပွဲ
Posted on July 21, 2009 at 5:39pm2Comments
http://www.mit2009.co.cc SIL မှ Padauk Unicode Font အသစ်ထွက်
Posted on June 14, 2009 at 10:00am3Comments
ယခု အပါတ်တွင် အရေးပါသော မြန်မာ ယူနီကုဒ် font ဖြစ်သည့် Padauk အသစ်ကို SIL International မှ ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=Padauk တွင် download လုပ်ယုရန်။ ယခု version တွင် မည်သည့် feature အသစ်များ ပါမည် ဖော်ပြမထားသောလဲ bug fix update ဖြစ်လောက်သည်။ အရင် 2.4 သည်… Continue Sphere Algebra
Posted on June 9, 2009 at 6:00pm2Comments
အသုံးချ သင်္ချာပဲ သင်လာခဲ့ရတော့ algebra ကို 'အရှိ' ပဲလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ သင်္ချာသမားတွေရဲ့ 'လုပ်ကွက်' မှန်းမရိပ်မိဘူး။ အဆင့်မြင့် သင်္ချာသမားတွေအတွက် algebra ဟာ rules တွေ laws တွေ (commutative, associative, etc) နဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ system တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ rule တွေ ထုတ်ခြင်သလိုထုတ်ပြီး algebra system များကို လိုသလို တည်ဆောက် နိူင်သည့်သဘော။ ဒီလို ဖန်တီး တည်ဆောက် ထားတဲ့ system တွေက programming မှာ .NET framework လို Java API လို အလွန်အသုံးဝင်ပြီး ခက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိူင်စေပါတယ်။ ဥပမာ… Continue ကျောင်းထွက်စ IT Professional လမ်းကြောင်း
Posted on June 8, 2009 at 9:00pm 33 Comments
IT professional တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောကြည့်မယ်။ အခြား အလုပ် များထက်စာရင် IT professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က ပိုရှင်းလင်းပြီး တိကြတဲ့ လမ်းရှိပါတယ်။ နိူင်ငံခြားမှာ သွားလုပ်ဖို့ပြောတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာအတွက် ဆို လမ်းမရှင်းဘူး။
၁။ ဘွဲ့ တစ်ခု အမြန်ဆုံး ယူထားဗျာ။ engineering, computer science တို့ သိပ်ကောင်းပေါ့။ full-time4years study လုပ်တဲ့ ရိုးရိုး science လဲဖြစ်ပါတယ်။ part-time / distant ဆို မကြိုက်ဘူး။
၂။ English စာ မွတ်နေအောင် ကျင့်ထား။ မှန်ဖို့ ထပ် ရဲရဲ… Continue AddaBlog Post
At 12:33am on July 21, 2010, ကိုဖိုးတရုတ် said… Dear Brother,
I sent the message to you. Please check the inbox of your myanmaritpro account.
I am looking forwarded to hear from you.
Photayoke At 8:38pm on December 31, 2009, manawphyulay said… At 3:53pm on December 3, 2009, lynn lynn said… အစ်ကို ရယ် ကျွန်တော် အရေးကြီးနေလို့ပါဗျာ ကျွန်တော် interview ၀င် ရမှာမဟုတ်လို့ပါ
MCITP ,MCTS ရယ် ကို ကျွန်တော် ကို အသေးစ်ိတ် ကွဲပြားပုံမေးမှာ မဟုတ်လို့ ပါဗျာ
အရမ်း အရေးကြီးနေလို့ ပါ အစ်ကို ရာ ဘယ်သူကိုမှလည်း မေးလို့ မရလို့ပါ အစ်ကို
ကျွန်တော် မေးလ် က hellokyaw@gmail.com ပါခင်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် At 4:43pm on October 22, 2009, Wayne said… Thanks for adding me bro,
Hoping to learn from you...
:) At 3:08pm on August 29, 2009, Phoe Htoo said… Hi..O ki san,
Nice to meet u.. I want to know about Unicode in detail and how it is made by myself. my mail is phoohtoo@gmail.com At 4:48pm on May 27, 2009, Nyein said… お兄さん、　お元気　ですか。。。 At 8:50pm on May 5, 2009, manawphyulay said… နေကောင်းလားရှင့် မတွေ့တာ အတော်ကြာပေါ့... At 12:40pm on April 1, 2009, chan minn maung said… ကိုOkisanရေ ကျွန်တော်က ဖိုးချမ်းပါခင်ဗျာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။
အကိုကိုခင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော့် Gmail လေး Add လုပ်ပေးပါလား
chanminnmaung(at)gmail.com ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ At 12:28pm on April 1, 2009, chan minn maung said… ကိုOkisanရေ ကျွန်တော်က ဖိုးချမ်းပါခင်ဗျာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။
chanminnmaung(at)gmail.com ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ At 11:58am on April 1, 2009, chan minn maung said… ကိုOkisanရေ ကျွန်တော်က ဖိုးချမ်းပါခင်ဗျာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။
chanminnmaung(at)gmail.com ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ No comments yet!